Blockchain News 25 Ndira 2018 - Blockchain News
Indonesian hurumende kudzidza Bitcoin kuti inobatsira sechinhu mubhizimisi
Hurumende Indonesian iri kufunga kushandisa Bitcoin kwakaita sechinhu mubhizimisi chiridzwa, ari Trade hwoUmambo hwaMwari hwamangwana Exchange Supervisory Board (Bappebti) akati.
"Achishandisa Bitcoin somunhu chiridzwa mubhadharo hakubvumidzwi, asi sei pamusoro kurishandisa ive mubhizimisi chiridzwa? Ko izvi vakabvumira kana kwete?"Bappebti musoro Bachrul Chairi akati musi weChipiri muJakarta, Sezvinotaurwa nezita kompas.com.
Indonesian Law No. 7/2011 pamusoro mari inoti iri Rupiah ndiye chete yepamutemo kutengeserana uye mubhadharo mudziyo munyika.
Bachrul akati Bappebti kudzidza zvinoita kushandiswa Bitcoin somunhu mubhizimisi chiridzwa. "Kuburikidza kudzidza, tinoda kuona kana Bitcoin anogona kubatwa somunhu digital twa," akati.
Market cherechedzo uye kukura Bureau musoro Dharmayugo Hermansyah pa Bappebti vati sangano akaona mukana wokuita zvakawanda muna Bitcoin chigadzirwa wokutengesera.
voga, Gurukota rezvemari Sri Mulyani Indrawati akati kuti hapana murau munyika wairambidza vagari vemo kubva bhizimisi iri cryptocurrency. "Zviri vanhu kushandisa Bitcoin somunhu mubhizimisi chiridzwa,"Iye akasimbisa.
First Bitcoin mitoro ngaakuitirei transports gorosi kubva kuRussia Turkey
Cryptocurrencies vari kutanga kupinda chikafu chinokosha wokutengesera.
Wokutanga mitoro ngaakuitirei kugara Bitcoin akaurayiwa mwedzi rapera mudziyo akatakura gorosi kubva pamusoro shipper kuRussia Turkey, maererano Prime Shipping Foundation, ari asingashumbi seri kutengeserana.
The consignment yaiva chikamu mutyairi kuidzwa Prime Shipping Foundation kuti blockchain muripo marongedzero hombe hazvo, akati Chief Executive Officer Ivan Vikulov.
The ledger-kwakavakirwa digitaalinen Michina kuchaita kuti nokukurumidza kubudiswa vachibhadhara uye kutendeuka kunyika uye kubva cryptocurrencies, maererano kambani, kudyidzana pakati Gibraltar anotsanangura cheVaapositori Capital Ltd. uye chikepe bhuroka Interchart LLC. Boka riri kurongawo kusika ayo digitaalinen mari pachayo.
CEO pamusoro pakukura bhangi reRussia: Cryptocurrencies hakufaniri kurambidzwa
Nesimba Russian bhenga Herman Gref, musoro Sberbank, akaita akadzokorora nzvimbo yake mukushora kurambidzwa kubva cryptocurrencies.
Zviremera Russian uye vakuru zvemari zvinofanira anoshivirira cryptocurrencies uye blockchain rwokugadzira, Russian nhau sangano TASS anotora Sberbank CEO Herman Gref akatoti. The bhenga vakaenda pane rimwe danho, vachisimbisa kuti cryptocurrencies hausati kunzwisiswa uye chero murau vanofanira kuyerwa uye vaiona, kwete reactionary.
Gref akati “It [crypotocurrencies] hazvifaniri kurambidzwa, sezvazvakaita guru Michina mutsva kukura, izvo hapana achiri kunzwisisa.”
Pakati 2016, pakati Russian mari ushumiri racho (vakakundikana) kuedza ataure bitcoin kurambidzwa bhiri kuti criminalized bitcoin adopters, Gref pachena akataura zvokukunda shoma bitcoin uye kushora bhiri. Panguva, ushumiri mari reRussia zvinganaka jeri kusvika 7 makore bitcoin adopters.
Brisbane Airport kubvuma Bitcoin
Brisbane Airport ave vakapiswa pacharo sezvo digitaalinen mari noushamwari Airport kutanga kwenyika.
The Aussie Airport yave partnered nevakawanda retailers uye TravelbyBit. Vafambi nokukurumidza kukwanisa kushandisa TravelbyBit kuti cryptocurrency mubhadharo maitiro, zvinosanganisira Bitcoin nemamwe digitaalinen dzeEurope, kuti adye uye tenga panguva dzakawanda dzakasiyana zvitoro mhiri vose zviteshi.
The Kudyidzana unotsigira Brisbane Airport kwakaita chinangwa kutsigira mabhizimisi vemo, uvandudze mufambi ruzivo, uye uve mutungamiri yendege digitaalinen utsanzi nzvimbo.
Kubva Airport senga kuti umbozha hotera pokugara, uye zvokudya uye varaidzo yokuitira muna kushinga Valley Brisbane raMwari, Brisbane rave rebranded ne veko sezvo 'Crypto Valley' vanopfuura 20 vatengesi munharaunda zvino achitora digitaalinen mari kubhadhara.
Caleb Yeoh, CEO pamusoro TravelbyBit, akati "Kana kuenda mhiri kwemakungwa auchasangana multiple dzeEurope uye hauzivi chii Exchange pemahombekombe vari kuchaja iwe. Pano pana TravelbyBit tiri kutsigira Bitcoin navi sangano. Digital mari nokuti nyika yose kufamba. Hazvina nyore, yakachengeteka uye hakuna bhengi mari yechikoro,"Mr Yeoh akati.
Stock zvokutengeserana App Robinhood kuti vomurova Bitcoin & Ethereum zvokutengeserana
Vatengi muCalifornia, Massachusetts, Missouri, Montana uye New Hampshire vachakwanisa kuchinjanisa bitcoin uye ethereum kuburikidza Anwendung kutanga muna February, Robinhood vakazivisa China. Panguva iyi, Vatengi vose zvino vanogona chamber mitengo uye nokugamuchira Alerts nokuda 16 cryptocurrencies pamusoro Anwendung.
Robinhood vatanga anenge matanhatu apfuura sezvo nzira makasitoma, kunyanya vaduku vanoita, kuti kuchinjanisa mumatanda kuburikidza smartphones zvavo vakasununguka. Robinhood ane shoma akabhadhara basa, uye muna December vatanga mikana wokutengesera. The kambani zvino kupfuura 3 miriyoni vanozvishandisa, ne 78 muzana vasawira dzinonzi eMillennial zera che 18 kuti 35 zera.
For cryptocurrency wokutengesera, Robinhood kuva mubhizimisi minimums kana maximums, uye hapana kurega nemiganhu. Pakutanga-up uchanamatira dzakawanda digitaalinen mari is mune inonzi chando okuchengetera. Tsika kunodzivisa hackers vasaba mari.
Vaimbove UBS mabhanga the ...
Previous Post:Payment opareta mutsetse anoramba Bitcoin
Next Post:Kurwisa nezvombo chakaitwa musi Canadian Crypto Exchange